Tag: multivariate kuyedza | Martech Zone
Tag: multivariate kuyedzwa
China, December 1, 2016 Mugovera, December 3, 2016 Douglas Karr
Google Optimize yatanga mu beta kuboka rakashoma revashandisi. Ini ndakakwanisa kusaina uye ndikafamba-kekuno kuchikuva nhasi uye zvese zvandingati - wow. Pane zvikonzero zvitatu nei ndichifunga kuti izvi zvichave kukanganisa kukuru mumusika wekuyedza. Muchokwadi, dai ndaive chikuva chekuyedza, ndinogona kunge ndiri kubuda izvozvi. Iyo yekushandisa interface inoenderana nezvimwe